Cudurro | På blodigt allvar
Endometriosis, PCOS ama miyom? Waxaan kaa caawineynaa u kuurgalka qaar ka mid ah cudurrada ugu caansan ee wehliya caadada dumarka, waxaanna ku siineynaa talooyin ku saabsan waxaad sameyn karto haddaad dhibaatooyinkooda isku aragto.
Endometriosis waa cudur xuub-axaleedka ilmagaleenku uu ka soo baxo, kuna weynaado meelo ka baxsan ilmagaleenka. Cudurku wuxuu sababi karaa xanuun inta lagu jiro xilliga caadada iyo ka dibba, taasoo inta badan lagu qaldo caado-xanuunka xooggan.
Endometriosisku way adag tahay in lagu ogaado baaritaanka caadiga ah ee takhtarka dumarka oo si loo hubiyo qalliin ayaa loo baahan karayaa.
Miyom waa guntanno-muruqeed ku yaal ilmagaleenka gudihiisa ama oogadiisa. Inta badan ma aha wax khatar ah oo dumar badan wax dhibaato ah miyomka kama dareemaan. Astaamaha ugu caansan waa caado dhiiggeedu iyo xanuunkeedu ay xooggan yahiin.
Haddaad dhiigbaxeyso muddo ka dheer 7 cisho oo isku xiga, aad ku khasban tahay inaad saacaddiiba dhawr goor suufka iska badesho, habeenkiina aad in badan beddelkiisa u kacdo waa inaad takhtar ballansato.
PCOS waxay u taagan tahay Polycystic Ovarian Syndrome, taas oo ay micneheedu tahay in mid ka mid ah ama labada ugxansidе ay yeeshaan kiishash-yarayaal, tiradoodu ay caadiga ka badan tahay. Hoormoonka testosteroonka ayaa ku bata jirka, taasoo adkayn karta uureysiga. Caadada ayaa dhif noqota ama la waayaa. Astaamahiisa waxaa kale oo ka mid ah miisaanka oo kordha iyo oogada oo ay ka soo yaacaan finan iyo timo badan.
PCOS wuxuu ku hayn karaa adiga oo aannan dareemin wax dhib ah, laakiin haddaad caadada heshid in ka yar 4 goor sannadkii, waa inaad ballan lagugu baarayo takhtarka ka qabsataa.
PMDS (oo u taagan Premenstrual Dysphoric Syndrome) waa PMS noociisa daran. Dhibaatooyinku waxay bilowdaan caadada ka hor, mararka qaarkood xilliga ugxanaynta, waxayna dhammaadaan markay caadadu billaabato. Calaamadaha PMDS ee u dheer astaamaha PMS, waa dareenka degdegga ah ee xanaaqa, walbahaarka, madluunsanaanta iyo feejignaandarrada. Cudurku wuxuu inta badan dhaliyaa caqabado xagga cilaaqaadka, waxbarashada iyo shaqada.
Haddii aad u aragto in PMS-kaagu uu yahay mid aad u daran oo noloshaada xannibaya waa inaad daryeel caafimaad raadsataa.
Waxaan kugu hageynaa daryeel iyo taakulo habboon!